Shiinaha Shiinaha Casriga Fudud Caddaan Caan ah oo Jabbaan ah oo Iskujira Qolka Nolosha Sofa Furniture # 0027 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Qaab Casri ah oo Casaan Jaban ah oo Qaab Jabaan ah oo Isku Darsan Qolka Fadhiga Sofa Furniture # 0027
Lambarka nambarka: Amac-0027
Cabir: Laba kursi: 1370 * 750 * 840mm
Kursiga kaliya: 810 * 750 * 840mm
Saddex kursi: 1970 * 750 * 840mm
Jiilaal iyo xagaaga fadhiga laba-ujeedka ah
Qaabka guud waa la soo dhoofiyay geedkii caddaa, looxyadii oo dhan, naqshaddii labada-ujeedo ee dhabta ahayd ee jiilaalka iyo xagaaga, sidoo kale waa lagu raaxeystaa in la fariisto barkinta la'aanteed, qaybta qabowna waxay ku taal badhida. Khadadka waa sahlan oo xarrago leh, taageeraduna way fiican tahay. Loox kasta oo alwaax ah ayaa lagu sifeeyaa gacanta farshaxanimaduna waa ku fiican tahay si loo hubiyo joogteynta. Dhabarka dambe wuxuu dammaanad ka qaadayaa raaxadaada iyo nasashadaada, isagoo ku siinaya khibrada fadhiga ugufiican ....
Barkin isbuunyo adkeysi sarreeya
Barkinta isbuunyada adkaysiga badan, oo ay ka buuxdo barkin isbuunyo tayo sare leh, dharka daboolka kursiga wuxuu ka samaysan yahay cudbi maqaarka u fiican iyo walxaha linenka ah, waxaana lagula dhaqmay xirmo u adkaysta, kubad la'aan, caaryo la'aan, hoos u dhac, khilaaf iyo maya koronto ma guurto ah. Qoto dheer fadhiga fadhiga ayaa la tijaabiyay marar badan, dhererka ugufiican ayaa loo qaabeeyay si cilmiyaysan. Markay martidu guriga yimaadaan, dhabarka dambe ayaa laga saari karaa si loo sameeyo sariir ku meel gaar ah.
Naqshadaynta qaabdhismeedka gacmeedyada qalooca
Kaamfer-ka qaab-dhismeedka qaansada ayaa gacan lagu sifeeyaa si looga hortago boodboodka, u siman taabashada, waxaana ku xiran qaab dhismeedka tenon-iyo-mortise, kaas oo ah mid adag oo adag Qaabdhismeedka alwaaxa adag, qoryuhu waa adag yahay, si kasta oo aad u booddid, fadhiga ma ruxmayo, wuxuu ku taageeri karaa muuqaal kasta adigoon ka welwelin burburka. Xargaha gacmaha ee qalooca ayaa si fiican u taageeraya gacmahaaga iyo gacmahaaga, taas oo kuu oggolaanaysa inaad nasato qayb kasta oo raaxo leh.
Lugaha fadhiga adag
Gees kasta oo ka mid ah kursiga fadhiga ayaa loo safeeyey inuu ahaado mid wareegsan oo siman, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu raaxeysaneysa inuu ku tiirsanaado, oo uusan taaban doonin dhammaan qaybaha jirka. Lugaha fadhiga waxaa laga sameeyaa waxyaabo adag oo culus si culeyska loo adkeeyo. Qeybta hoose ee lugaha fadhiga ayaa ah kuwo aan siibiibi karin oo u adkeysanaya dharka, taas oo ilaalinaysa dabaqaaga isla markaana sii dheereynaysa nolosha fadhiga.
Dusha fadhiga fadhiga oo la dhaqaajin karo lana dhaqi karo
Naqshadda fadhiga fadhiga ee la fuqi karo lana dhaqi karo, markaa uma baahnid inaad ka walwasho nadaafadda. Noloshu waxay na siisaa astaamaha degganaanta iyo nasashada, waxay ku faaftaa niyadda farxadda leh, farxadna si aan ula kac ahayn ayey u buuxisaa guriga cusub.
Midabbo qaabab isku mid ah oo isu eg
La soo xulay geedkii Waqooyiga Ameerika, maaddada 100-jirka ah, oo leh awood farsamo sare, muuqaal cad, iyo qiimo qoryo sare leh. Dharbaaxada waaweyn si toos ah ayaa loo soo uruuriyay, oo leh qalab adag, adag oo adkeysi leh.
Hore: SUP guddi tallaab midab u dhigma buufin la buufin leh baalal 0372
Xiga: Sterner Pet Metal Main House Cage yar oo daadsan oo leh Quudiyaha 0244
Sariir fadhiga raaxada leh
Sofa Laba-laable ah
Casriga Sofa Set
Sariirta Sariirta leh Kaydinta
Sariirta Kursiga Sarta
Alwaax adag alwaaxa kaydinta golaha wasiirada k ...
Saldhigga Xafiisku Waa Qoryo Adag ...